Cloud-based လုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်သိုလှောင်မှု | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » Cloud-based လုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်သိုလှောင်မှု
တွမ် Coughlin, Coughlin Associates မှ, Inc, www.tomcoughlin.com
COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ၂၀၂၀ ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည် NAB ပြပွဲ Las Vegas မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်အဖြစ်။ ၎င်းအစားပြသခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှုစနစ်နှင့်မီဒီယာအမျိုးမျိုးနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲများကိုတင်ဆက်သူများသည်Aprilပြီလနှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇွန်လအထိ Virtual Event သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ NAB ပြရန် အမြန် (nabshow.com/express/).
များစွာသောစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ၏ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအလုပ်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားသည့်အခါ cloud-based လုပ်ငန်းအသွားအလာသည်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်မှုရှိသည်။ လက်ရှိ quarantine သည် cloud-based လုပ်ငန်းအသွားအလာလမ်းကြောင်းကိုအရှိန်မြှင့်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွထပ်မံအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်တိုင်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ Cloud မပါရှိရင် M&E ပညာရှင်အများစုဟာအလုပ်မရှိဘဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါမတိုင်မီကပင် Cloud-based လုပ်ငန်းအသွားအလာသည်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ 2020 HPA Retreat တွင် cloud workflow options နှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောဒါရိုက်တာများကို ဦး ဆောင်သောကုမ္ပဏီများသည် live cloud-based workflow အတိုဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။ ပျောက်ဆုံးသွားသော Lederhosen.
ကျွန်ုပ်၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာဒီဂျစ်တယ်သိုလှောင်ခြင်းဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကိုအထောက်အကူပြုရန် Cloud သိုလှောင်မှုသိသိသာသာကြီးထွားမှုကိုခန့်မှန်းခဲ့သည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ)) ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အစီရင်ခံစာတွင်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုစတင်ပြီးနောက်သုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ ဝေးလံခေါင်သီသောအလုပ်များနှင့် cloud သိုလှောင်ခြင်းများတွင် cloud သိုလှောင်မှုတိုးတက်မှုသည်ပိုမိုမြင့်မားလာလိမ့်မည်။ ကူးစက်ရောဂါသည် cloud အသုံးပြုမှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် Cloud-based လုပ်ငန်းအသွားအလာများနှင့်ဤလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုထောက်ပံ့ရန်အထူးသဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများကိုလေ့လာသည်။ သတိပြုရမည်မှာ ၂၀၂၀ NAB တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည့်ကုမ္ပဏီအမြောက်အများသည် virtual event များတွင်ပါ ၀ င်နေသော်လည်း၎င်းဖြစ်ရပ်များသည်Aprilပြီမှဇွန် ၂၀၂၀ အထိအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပျံ့နှံ့သွားသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သောအရာများအကြောင်းကျွန်ုပ်ပြောမည်။ ။
အမေဇုံဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှု (AWS) တွင်ရှိသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် NAB ကို virtual ဖြစ်ရပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှတစ်ဆင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလွန်ကဲခြင်းမှဝေးလံသောအလုပ်များကိုအာရုံစိုက်ခြင်း။
များစွာသော M&E ကုမ္ပဏီများသည် AWS ဝန်ဆောင်မှုများကို Turner, Untold, Rock and Roll Hall of Fame, Fox, HBO, Hotstar နှင့် Eurosport စသည်တို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပါဝင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက် cloud5based media supply ကွင်းဆက်အတွက်အင်ဂျင်နီယာ EMMY ဆုကို AWS သည်ကုမ္ပဏီ ၅ ခုတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
AWS သည် latency အထိခိုက်မခံသောမီဒီယာပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ် ၃ ခုကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဤရွေ့ကား AWS ဒေသခံဇုန်များ, AWS တပ်စခန်းနှင့် AWS လှိုင်းအလျား။ Local Zones သည်သင်၏နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများနှင့် AWS ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာနေခြင်းအားဖြင့် latency နည်းသည်။ AWS ၏တပ်စခန်းများသည် AWS ထုတ်ကုန်ကိုသင့်ဒေတာစင်တာသို့သယ်ဆောင်လာသည်နှင့်တစ်နေရာတည်း၌ဖြစ်စေ၊ AWS လှိုင်းအလျားသည်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတီထွင်သူများကိုတစ်လုံးတည်းသောမီလီစက္ကန့် latency များဖြင့်အက်ပ်များကိုပို့ဆောင်စေသည်။
AWS သည် Windows သို့မဟုတ် Linux အတွက် virtual workstations များကိုစျေးနှုန်းတူညီစွာဖြင့် NVIDIA T4 Tensor Core CPUs နှင့် NVIDIA Quadro အလုပ်နေရာများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ AWS Thinkbox Deadline (သို့) သင် ဦး စားပေးသော render management စီမံချက်ကိုအသုံးပြုပြီး AWS ကို hybrid (သို့) အများသုံး cloud အဖြစ် rendering လုပ်ပေးသည်။ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးကိုသင်သုံးစွဲသည့်အတိုင်းပေးချေရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
2019 ခုနှစ်တွင် Fox ကကေဘယ်လ်နှင့် AWS ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် ဂြိုဟ်တု အချို့သောထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများနှင့် AWS ဒေသတွင်းရှိ AWS Outposts များကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လွှင့်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်ရေးအခန်းသည်မိုinto်းတိမ်သို့ ၀ င်လာသောအခါအောက်ဖော်ပြပါပုံသည် AWS ကို အသုံးပြု၍ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၏အနာဂတ်မည်သို့မြင်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။
AWS သည် AWS Elemental MediaStore (မီဒီယာပိုမိုကောင်းမွန်သည့်သိုလှောင်မှုနှင့်မူရင်းရင်းမြစ်) ကို အသုံးပြု၍ အနိမ့်ကျသောပါဝင်မှုဖြန့်ဝေခြင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ NAB 2020 အတွက် AWS သည် Elemental Live ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ကုမ္ပဏီကပြောကြားရာတွင်၎င်း၏ Elemental MediaConvert နှင့် Accelerated Transcoding သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော AV1 encoding ကိုယနေ့ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံသည် AWS Elemental MediaLive သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏မီဒီယာစစ်ဆေးမှုအကွက်တွင်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းကိုမည်သို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်ကိုပြသည်။
Qumulo Hybrid cloud file သိုလှောင်မှုနှင့်အချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည် အချို့သောကို virtual NAB ဗီဒီယိုများ။ အဆိုပါ M & E ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် Qumulo's ပစ်မှတ်စျေးကွက်။ Adobe က Premiere Pro နှင့် After Effects တို့ကို တွဲဖက်၍ ကြေငြာခဲ့သည် Qumuloဖိုင်ဝန်ဆောင်မှုများသည်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့များကိုစတူဒီယိုရှိ workstations ကဲ့သို့စွမ်းဆောင်ရည်၊ လက်လှမ်းမီမှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအဆင့်များနှင့်တူညီသော cloud သိုလှောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုဖန်တီးတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ QumuloCloudStudio သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်တွင်အစဉ်အလာအားဖြင့် hardware နှင့်သက်ဆိုင်သောပရောဂျက်များကို AWS နှင့် GCP ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးရှိအများပြည်သူသုံး cloud သို့ရွေ့ပြောင်းခွင့်ပြုသည်။
လေ့လာသုံးသပ်များအတွက်ရှင်းလင်း၌တည်၏ Qumulo ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုပြောဆိုခဲ့သည် Qumulo၊ Adobe နှင့် Teradici တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပူးပေါင်းစပ်စပ်စပ်တည်းဖြတ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ဒီပေါင်းစပ်မှုကအကန့်အသတ်မရှိချုံ့ချဲ့နိုင်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်မြင်သာမှုတို့ကို အသုံးပြု၍ စုတ်ပြဲခြင်းတို့ကိုပေးနိုင်ခဲ့သည်။ Qumulo သရုပ်ခွဲကိရိယာများ။
ကွမ်တမ် StorNext file system နှင့် cloud content များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော StorNext file system နှင့်မည်သည့် cloud နှင့် object store အတွက်သိသိသာသာတိုးတက်ခြင်းနှင့် read and write speeds များကိုကြေငြာခဲ့သည်။ StorNext 6.4 အသစ်များသည် hybrid-cloud နှင့် multi-cloud အသုံးပြုမှုကိုကူညီရန်ကူညီသည်။ မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အခြားဒေတာများသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
StorNext 6.4 တွင် cloud content များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာအလွယ်တကူရရှိနိုင်စေရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြသည့်အရာဝတ္ထုများကိုပေါင်းစပ်ပြီး hybrid-cloud workflows အသစ်များကိုပြုလုပ်သည်။ Client သည် StorNext ဖိုင်စနစ်ထဲသို့ဖိုင်များရေးသည်၊ ထို့နောက်ပေါ်လစီပေါ် မူတည်၍ StorNext သည်အရာ ၀ တ္ထု metadata များကိုထည့်ရန် option နှင့်အတူအများပိုင်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိက cloud ထဲသို့ဖိုင်များကိုကူးယူသည်။ Non-StorNext ဖောက်သည်များနှင့် cloud-resident ဖြစ်စဉ်များသည်ယခုတိုးချဲ့သည့် metadata အသစ်များကို အသုံးပြု၍ အရာဝတ္ထုများကိုတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင် StorNext 6.4 ၏ multi-threaded put / get စစ်ဆင်ရေးများသည်တစ်ခုတည်းသောကြိုးဖြင့်လည်ပတ်မှုထက် 5X မှ 7X တိုးတက်မှုကိုပေးသည်။
NetApp ကသူ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်နေတယ် ဇွန်လ2ရက်နေ့တွင်ကို virtual NAB ဖြစ်ရပ်။ စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်များကို M&E လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုပံ့ပိုးပေးမည့်မီဒီယာဒေတာထည်ကိုဖန်တီးရန်မိတ်ဖက်များနှင့်အတူသူတို့၏ဖြစ်ရပ်သည်သူတို့၏ဖြေရှင်းချက်များကိုပြသလိမ့်မည်။
Dell Technologies တွင်လည်းရှိခဲ့သည် တစ် ဦး ကို virtual ဖြစ်ရပ် မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်၎င်းတို့၏တွက်ချက်မှုနှင့်သိုလှောင်ရေးကိရိယာများကိုပြသသကဲ့သို့ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအသွင်ပြောင်းမှုများအတွက် Dell Isilon သိုလှောင်မှုနှင့်အတူ Adobe နှင့်သရုပ်ပြမှုများပြသသည်။ သူတို့ရဲ့ On-demand ဗီဒီယိုက metadata access ၏အရေးပါမှုအကြောင်းပြောခဲ့သည်။ Adobe ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး က Dell Isilon သည် Adobe ၏ Productions (Premiere ၏အစိတ်အပိုင်း) လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်မည်သို့ကူညီခဲ့သည်ကိုပြောခဲ့သည်။ သတိပြုရမည့်အချက်မှာ ၂၀၂၀ တွင် OneFS.Next နှင့်အတူ Isilon server နှင့် cloud ပလက်ဖောင်းအတွက်အစီအစဉ်များရှိသည်။ companyပြီလကကုမ္ပဏီကလအနည်းငယ်အကြာတွင်ပိုမိုပြောနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Dell မှာသူတို့ရဲ့ဒေတာကိုပထမဆုံးမဟာဗျူဟာအကြောင်းပြောနေတဲ့ဆလိုက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်။ ဤသည်သည်တိမ်တိုက်များ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ များပြားလှသည့်မိုးတိမ်နှင့်အများသုံးမိုးတိမ်များအကြားအချက်အလက်များကိုရွေ့လျားရန်ပြည့်စုံသောမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။
Dell သည် IP အခြေပြုလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုများစွာလုပ်ဆောင်နေသည်။SMPTE ၎င်း၏ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ 2110) ။ သူတို့ရဲ့ on-line ကိုအသံသွင်းထဲကတစ်ခုစဉ်အတွင်းကနေကျွမ်းကျင်သူ IABM M&E ပညာရှင်များသည်သရုပ်ဆောင်များနှင့်ဗီဒီယိုအသစ်ရယူရန်ခက်ခဲသောကြောင့်မော်ကွန်းတိုက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုထောက်ပြသည်။ DI သည် Greymeta နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပြီး AI မှထုတ်လုပ်သော metadata မှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏ Iris ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ မော်ကွန်းတင်ထားသောအချက်အလက်များကိုလွယ်ကူစွာရယူနိုင်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Dell ၏သိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအစီအစဉ်များကိုအဆင့်မြင့်အမြင်ဖြင့်တင်ပြထားသည့်သူတို့၏အွန်လိုင်းတင်ဆက်မှုပုံမှအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
လွန်စွာလိုလားသော ပေးအပ် စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုအဝေးမှအလုပ်လုပ်ခြင်း။ Marquis Broadcasting သည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာများကိုပေါင်းစပ်ပေးသည် လွန်စွာလိုလားသော Wasabi cloud သိုလှောင်မှု (backup အတွက်) နှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အတူ Nexis သိုလှောင်မှု။
Spectra Logic သည် M&E လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်သိုလှောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသူအဖြစ်ကောင်းစွာတည်ထောင်ထားသည်။ သူတို့ရဲ့မှာ ကို virtual NAB တင်ပြချက်များ သူတို့ BlackPearl အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုတံခါးပေါက်အတွက်အဆင့်မြင့်အသုံးပြုမှုကိုပြသခဲ့သည်။ BlackPearl သည် Spectra ၏စုစည်းသိုလှောင်မှုစနစ်၏အခြေခံဖြစ်ပြီးအများပြည်သူနှင့်မျိုးစပ်သောတိမ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ multi-site storage နှင့် HDD အခြေခံအရာဝတ္ထုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်သံလိုက်တိပ်များစာကြည့်တိုက်သိုလှောင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Riobroker ကို 2019 NAB တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာနှင့် metadata နှင့် indexing များကိုခွင့်ပြုပေးပြီး Black Pearl သို့ကူးပြောင်းသည့်အင်ဂျင်နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိုင်ပြန်လည်ရရှိစေသည်။ ၎င်းတွင်အများပြည်သူသုံးမိုးတိမ်သို့သိုမဟုတ် data ရွေ့ပြောင်းမှုပါဝင်သည်။ RioBroker node များပေါင်းထည့်ခြင်းအားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနာမည်အာကာသနှင့်အတူရရှိနိုင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ Spectra ၏ StorCycle သည်သင်၏ချိတ်ဆက်ထားသောသိုလှောင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုများအားပညာတတ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုခွင့်ပြုသည်။
Wasabi သည် M&E ကိုကုမ္ပဏီ၏စျေးနှုန်းချိုသာသောသိုလှောင်မှုအတွက်အဓိကထားသည့်စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Cloud သိုလှောင်မှုကိုပေးပို့ရန် channel channel များနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီကပြောကြားသည်မှာ ၃rd party AWS S3 နှင့်လိုက်ဖက်သော application သို့မဟုတ် platform သည် Wasabi သိုလှောင်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်သင့်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် application ၂၀၀+ ကျော်ကို Wasabi interoperable ဟုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကုမ္ပဏီကပြောကြားရာတွင်၎င်း၏ထိပ်တန်းဟာ့ဒ်ဝဲနည်းပညာနှင့်အတူခေတ်မီရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဖိုင်စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် exabyte-scale သိုလှောင်မှုကိုပေးသည်။
ကုမ္ပဏီတွင်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်သိုလှောင်မှုတစ်ခု၏ဒေါ်လာ ၅.၉၉ / TB / mo အတွက် Egress အခကြေးငွေမပါ၊ API ခေါ်ဆိုမှုအတွက်လည်းအခကြေးငွေမရှိပါ။ ၂၀၂၀ တွင်ဝါဘဘီသည်လခပေးရသည့်သိုလှောင်မှုပမာဏကိုတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၅.၉၉ သို့မဟုတ်သိုလှောင်နိုင်သည့်ပမာဏမှာ ၅၀ မှ ၁၀ PB သို့ ၁.၃ သို့မဟုတ် ၅ နှစ်အတွင်းကြိုတင်ငွေပေးချေမှုကိုပေးသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ပြောကြားချက်အရ၎င်း၏သိုလှောင်မှုသည်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးကြာရှည်ခံမှုနှင့်ရရှိနိုင်မှုတို့ကြောင့်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်၏အစည်းအရုံး၏လိုက်နာမှုပါဝင်သည်။
Wasabi သည် LA ရှိ 1 Wilshire တွင်ပူးတွဲတည်ရှိသောစက်ရုံတစ်ခုရှိပြီး ၁၀၀ TB TB ၀ ါဘီဘောလုံးလွှဲပြောင်းပေးသည့်ပစ္စည်းနှင့်ပိုမိုများပြားသောပမာဏကိုစားသုံးရန်အတွက်။ US အရှေ့ကမ်းရိုးတန်း၊ ဥရောပ (အမ်စတာဒမ်) နှင့်အာရှ (ဂျပန်) တွင်သိုလှောင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီလည်းရှိသည်။ ထို့အပြင် Wasabi သည်သူတို့၏ cloud သိုလှောင်မှုသို့ ၁ နှင့် ၁၀ GbE ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောဆက်သွယ်မှုများကိုဖွင့်နိုင်သည်။
Backblaze သည် M&E အာကာသကိုပစ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုးနည်းသော cloud သိုလှောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် S3 Compatible APIs အသစ်များနှင့်အတူကြီးမားသော S3 ဂေဟစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများသည်အခြား cloud သိုလှောင်မှုရောင်းချသူများထံမှ Backblaze သို့စျေးသက်သာပြီး B2 cloud သိုလှောင်မှုသို့အလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။ BackBlaze ၏အမြန်နှုန်းကို IBM Aspera ကအမြန်နှုန်းလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အကွာအဝေးများဖြတ်ကျော်စီးဆင်းခြင်းအတွက်ထောက်ပံ့သည် ကွမ်တမ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာများကိုဖမ်းယူဖန်တီးခြင်း၊ မျှဝေခြင်းအတွက် Backblaze နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ မကြာသေးမီက Backblaze သည်သူတို့၏ cloud တွင် Exabyte တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများရှိသည်ဟုပြောခဲ့သည်။
မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုကိုပေးသည်။ ကုမ္ပဏီမှပြောကြားသည်မှာ "Object Matrix သည်ဖန်တီးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့များအားအလုပ်မှသို့မဟုတ်အဝေးမှမည်သည့်နေရာမှမဆိုပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုကိုယ်တိုင် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ဖန်တီးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့များကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများကိုအဓိကထားသည်။ " ၎င်းသည်ဝေးလံခေါင်သီသော M&E လုပ်ငန်းအသွားအလာများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့အားကူညီရန်အွန်လိုင်းမော်ကွန်းတိုက်မှအကြောင်းအရာများကိုကိုယ်တိုင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
Editshare ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့အထိ Flow Remote မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းကိုအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်st အိမ်မှတီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုကိုကူညီရန်။ ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၂၀ NAB ၌ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအတွက်လမ်းပေါ်ချဉ်းကပ်မှုကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည်။ ဤသည်တွင်ပူးတွဲလုပ်ငန်းအသွားအလာများနှင့်မော်ကွန်းတိုက်ကြွယ်ဝစေရန် AI ၏လက်တွေ့အသုံးချမှုများအတွက်တီထွင်သောကိရိယာများနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူမိုးတိမ်တွင်အဆုံးမှအဆုံးသို့ထုတ်လုပ်မှုကိုပံ့ပိုးရန် EFS နှင့် Flow နည်းပညာအသစ်များပါဝင်သည်။ EFSv သည်ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောပလက်ဖောင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီမှပြောကြားချက်အရသုံးစွဲသူများသည် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအသွင်ပြောင်းခြင်းမှအဝေးမှထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာများသို့လွယ်ကူစွာကူးပြောင်းနိုင်အောင်ကူညီပေးသည်ဟုဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီကပြောကြားရာတွင်“ EFS 2020 သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သည် EditShare သိုလှောင်မှုဆုံမှတ်များနှင့်ကွန်ယက်များကို - ရဝုဏ်အတွင်း၊ EFS 2020 နှင့်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်သော EFS 2020 သည်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအားကျယ်ပြန့်သောပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုတည်ဆောက်နိုင်စေပြီး၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့များကိုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကိရိယာများဖြင့်ပြည့်စုံသောနည်းပညာအဖွဲ့များကိုဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့်တီထွင်ဆန်းသစ်သော ၀ န်ထမ်းများအားအခြေခံရှုပ်ထွေးမှုမှကာကွယ်ပေးသည်။
Scale Logic သည်၎င်း၏ cloud-enabled NAS ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၊ အဓိက post-production tools များနှင့်အတူ NVMe အခြေပြု NX2 / ZX အသစ်ကို onboard Sync, Backup နှင့် Archive တို့ဖြင့်ဒေသခံတိပ်စာကြည့်တိုက်သို့သို့မဟုတ် Cloud library သို့သုံးနိုင်သည်။
များစွာသောအခြားကုမ္ပဏီများအပါအဝင်မိုcloud်းတိမ်ကိုစီးအသွားအလာနှင့်ဆက်စပ်သောပူဇော်သက္ကာကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Masstech လုပ်ငန်းအသွားအလာများ၌ cloud သိုလှောင်မှုနှင့်ဝေးလံသောတည်းဖြတ်ခြင်းကိုကူညီခြင်းအတွက်အကူအညီပေးခြင်း။ ဒီထုတ်ကုန်သည်အသေးစား၊ အလတ်စားနှင့်ကြီးမားသောဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းဖြင့်အဝေးထိန်းတည်းဖြတ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့သည်။
COVID ရောဂါသည်ဝေးလံခေါင်သီသောမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်ပြီးအဝေးမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် M&E ပညာရှင်များနှင့်သူတို့၏အလုပ်ရှင်များကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ Local သိုလှောင်မှုထုတ်ကုန်များသည်ပျောက်ကွယ်မသွားသော်လည်းဝေးလံသောလုပ်ငန်းအသွားအလာများကို enable လုပ်ရန်အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ Cloud-based tools များသည်အနာဂတ်မီဒီယာစီမံကိန်းများ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီး hybrid နှင့် public cloud သိုလှောင်မှုကိုတိုးမြှင့်သည်။
Tom Coughlin, President, Coughlin Associates သည်ဒီဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်သူနှင့်စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံဖြစ်သည်။ သူသည်ဒေတာသိုလှောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ၃၉ နှစ်ကျော်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီအများအပြားတွင်အင်ဂျင်နီယာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများရရှိထားသည်။ Coughlin Associates သည်စာအုပ်များ၊ စျေးကွက်နှင့်နည်းပညာအစီရင်ခံစာများကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှု - ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။ သူသည်ပုံမှန်သိုလှောင်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ပံ့ပိုးသူဖြစ်သည် forbes.com M&E အဖွဲ့အစည်း ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ။ သူသည် IEEE အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော IEEE-USA ၏ဥက္က-္ဌဖြစ်ပြီး SNIA နှင့်ပါ ၀ င်သည် SMPTE။ Tom Coughlin နှင့်သူ၏ထုတ်ဝေမှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားပါ www.tomcoughlin.com.
 2019 မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးမှတ်တမ်းတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်ခြင်း, Coughlin Associates, 2019, tomcoughlin.com/product/digital-storage-for-media-and-entertainment-report/
ယခင်: TVU ကွန်ယက်များသည်အမေရိကန်အာကာသအေဂျင်စီမှသမိုင်းဝင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာနေရာလွတ်များအများဆုံးရရှိနိုင်မှုကိုအများဆုံးထောက်ပံ့ပေးသောလုပ်ငန်းစုတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: PSSI သည် American Idol Finale ၏ရှုပ်ထွေးသောဂီယာအင်ဂျင်နီယာများကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည်